कोइराला निवासको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेचे कोइरालाकै सन्ततिले - Dainik Nepal
कोइराला निवासको जग्गा कित्ताकाट गरेर बेचे कोइरालाकै सन्ततिले
दैनिक नेपाल २०७६ असार २ गते ७:३८
विराटनगर, २ असार । ३१ जेठमा झन्डै दुई सय कांग्रेस कार्यकर्ता विराटनगरस्थित कोइरालानिवास पुगे । काठमाडौंबाट कोइराला परिवारको उद्गम थलो सिन्धुलीको दुम्जा हुँदै विराटनगर आइपुगेका उनीहरूले बिपी कोइराला आठ वर्ष थुनिएको सुन्दरीजलस्थित जेलको माटो पनि साथमा ल्याएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ।
यहाँ आइपुगेका कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित थिए । कोइरालानिवासमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा दस्ता सरकारले भर्खरै हटाएकोमा उनीहरू रुष्ट थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि खटिएको सुरक्षा हटेपछि कांग्रेसवृत्तमा भुइँचालो नै गएको छ । मेयर पराजुलीले नगररक्षक खटाएर निवासमा पहरा दिन लगाइरहेका छन् ।कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेश सभामा हटाइएको सुरक्षाकर्मी बहाल गर्न माग पनि गरे । तर, सरकारले कोइरालानिवास व्यक्तिगत घर भएकाले सुरक्षा आवश्यक नभएको भन्दै हटाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले कांग्रेसको तीर्थलाई अपमान गरेको आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताले लगाएका छन् । नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको यो स्थान मासिने चिन्ता उनीहरूमा थियो ।
कांग्रेस कार्यकर्ता कोइरालानिवासलाई आस्थाको धरोहर तीर्थस्थल मान्छन् । तर, कोइराला खलकका सन्तानले यो स्थान अंशबन्डा गर्दै बेच्दै गरिरहेका छन् । सुरुमा कोइरालानिवास दुई बिघाजति जमिनमा फैलिएको थियो । कृष्णप्रसाद कोइरालाका पाँच भाइ छोरामध्ये मातृकाप्रसादले आफ्नो अंश पहिल्यै लिइसकेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद, केशवप्रसाद, तारणीप्रसाद र गिरिजाप्रसादले अंशमा ८–८ कट्ठा पाएका थिए । तिनका सन्तानहरूले जग्गा बेच्दै गएका छन् भने बेचिएका जग्गामा ठुल्ठूला घर बन्न थालेका छन् ।
त्यसैले कोइरालानिवासको दिनदिनै रूप गुम्दै गएको छ । निवासको बाटो मात्र होइन पूरै सौन्दर्य छेकिदिएको छ । पहिले एउटै रहेको निवासमा अब आउनेजाने बाटोसमेत अलगअलग भएको छ । सुजाताले आफ्नो भागमा परेको जमिनमा बुबा गिरिजाप्रसादको नाममा जिपी फाउन्डेसन खोलेर तीनतले भवन बनाइसकेकी छिन् । यो भवनले कोइरालानिवासको पुरानो मुख्य भवन नै छेकिदिएको छ । उनले जिपी संग्रहालय पनि बनाउँदै छिन् ।
कृष्णप्रसाद कोइरालाले वि.सं. १९९० तिर काठ, बाँस र माटो प्रयोग गरी बनाएको घर अहिले पनि उस्तै छ । पछि क्रमशः सिमेन्टका दुईवटा घर थपिए । कृष्णप्रसाद कोइराला हुँदैदेखि यहाँ चहलपहल हुन्थ्यो । त्यतिखेर व्यापारिक काम र भूमिगत राजनीतिका लागि प्रयोग हुन्थ्यो यो स्थान । ०१७ सालपछि पनि सुनसान भएन यो निवास । कांग्रेस सत्तामा रहँदा त यहाँको चहलपहल नै बेग्लै हुन्थ्यो । कृष्णप्रसादका तीन पुत्र मातृका, बिपी र गिरिजा प्रधानमन्त्री भए । पार्टी चलाउने केन्द्र कोइरालानिवास नै थियो । दर्जनौँ कार्यकर्ताको आवतजावत हुन्थ्यो ।
बिपी जीवित रहुन्जेल बारम्बार यहाँ आइरहन्थे । ६ साउन ०३९ मा काठमाडौंमा उनको निधन हुँदा विराटनगरको निवासमा कार्यकर्ताले एक वर्षसम्म विगुत राखेर, बत्ती बालेर श्रद्धा प्रकट गरेका थिए । त्यो कोठामा अझै पनि बिपीको बडेमानको तस्बिर सजाएर राखिएको छ । कर्मचारी, प्राध्यापकदेखि दुःख पाएकाहरूसम्म आइपुग्थे । नोना कोइराला रहुन्जेल निवासमा आशीर्वाद लिनेहरूको सधैँ घुइँचो हुन्थ्यो । चाँजोपाँजो मिलाउन सिपालु थिइन् उनी । निवासको संरक्षणमा खुव ख्याल गर्थिन् । उनको कोठालाई पनि अहिले तस्बिर सजाएर राखिएको छ ।
गिरिजा प्रधानमन्त्री भएका वेला पटकपटक विश्राम लिन विराटनगर आउने गर्थे । त्यसवेला झन् भिडभाड हुन्थ्यो । दर्जनौँ मोटर हुन्थे प्रांगणमा । पत्रकारहरू ‘स्कुप’ लिन ढोका कुरेर बस्थे । घर साँघुरो भएपछि आँगनमा सामियना लगाएर भेटघाट गर्न आउनेलाई प्रतीक्षालय बनाइन्थ्यो । गिरिजाप्रसादले कार्यकर्ता भेट्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्ने ठाउँ सजाएर राखिएको छ । सोफा, कुर्सी, फोटा उसैगरी राखिएका छन् । तर, अंशबन्डाका कारण जमिन टुक्रिँदै जाँदा यी समान संरक्षित नहुने हो कि भन्ने डर कांग्रेस कार्यकर्तामा देखिन्छ । कोइरालानिवास विराटनगरको शान र देशको गौरव भएको भन्दै कतिपय पुराना कार्यकर्ता यहाँको जग्गा बिक्री गर्न नदिन झन्डा गाड्ने, जेलको माटो ल्याएर ढोग्नेजस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छन् ।
अब बिपी र जिपीका उत्तराधिकारीमा डा. शशांक, डा. शेखर र सुजाता राजनीतिमा सक्रिय छन् । त्यसैले कोइरालानिवासको संरक्षण उनीहरूले नै गर्नुपर्ने धेरैको सुझाब छ । ‘कोइरालानिवासको अवस्था देखेर अहिले धेरै कांग्रेसी कार्यकर्ताको मन दुख्छ, चित्त फाट्छ,’ मेयर भीम पराजुली भन्छन्, ‘एकता र आदर्शको प्रतीक रहेको यो स्थान फुटको प्रतीक नबनोस् । अझै केही बिग्रेको छैन । निवासलाई सामूहिक संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने माग छ सबैको ।’कोइरालानिवास मास्नु भनेको गिरिजा र बिपीको इतिहासलाई मास्नुसरह भएको उनको भनाइ छ । कोइरालानिवास जोगिए मात्र कांग्रेस जोगिने कार्यकर्ता बताउँछन् ।कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हसन अन्सारी कोइरालानिवास कांग्रेसको तीर्थस्थल भएकाले यसलाई तीन कोइरालाले कहिल्यै बिरानो बन्न दिन नहुने बताउँछन् । त्यसका लागि उनीहरू एक हुनुपर्ने उनको सुझाब छ ।